स्मृति : मैले देखेको टुँडिखेल !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
स्मृति : मैले देखेको टुँडिखेल !
कार्तिक २३, २०७६ रामेश्वरप्रसाद बराल
पहिलोपटक म आइएको परीक्षामा सामेल हुन २०१८ सालको चैतमा काठमाडौं आएको थिएँ । म एक्लै होइन, मजस्ता धेरै मित्र यहाँ आएका थिए । काठमाडौं नै आउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो । भर्खर–भर्खरै शिशु त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैंले परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेको थियो । नत्र यी सबै परीक्षा पटना विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
पटनाले सञ्चालन गर्दा परीक्षाफल उतैको समाचारपत्र ‘आर्यावर्त’ ले प्रकाशित गर्थ्यो । मेरो एउटा दाजुको आईकमको परीक्षाफल दुुई वर्षअघि यसैमा आएको मलाई सम्झना छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गरेर आफैं स्थानीय शिक्षक–परीक्षकबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराएर परीक्षाफल प्रकाशित गरे पनि परीक्षाकेन्द्र काठमाडौ मात्र थियो । काठमाडौँबाहिर जति पनि कलेजका परीक्षार्थीहरू थिए, सबैले यहीँको केन्द्रबाट सामेल हुनुपर्थ्यो । जस्तो हामी विराटनगरबाट आयौँ, उसैगरी धरान, वीरगन्ज, पोखरा, पाल्पा आदि कलेजबाट परीक्षार्थी यहीँ ओइरिन्थे । त्रिवि आफैंले परीक्षा चलाएको लाभमा परीक्षार्थीले भाषा माध्यम छान्न पाएका थिए, अंग्रेजी वा नेपाली । नत्र कि अंग्रेजी कि हिन्दीमा लेख्नुपर्थ्यो ।
त्यतिखेरको काठमाडौं न्युरोडको सेरोफेरो पूर्वपश्चिममा मुस्किलले टुकुचा र विष्णुमती भन्न सुहाउँथ्यो । हामी विद्यार्थीनिम्ति तीनवटा थलो बढी महत्त्वका थिए– होटल, बहाल कोठा र फराकिलो टुँडिखेल । घुम्न, होटलमा खान आउन वा यहाँबाट कोठामा फर्किन साझे बाटो थियो, न्युरोड । यहाँभन्दा पर्तिर पुग्नु वा जानु हामी विद्यार्थीनिम्ति उति जरुरी थिएन । मैले त्यो वर्ष देख्ताको टुँडिखेल एउटा फराकिलो उत्तर–दक्खिन फैलेको सग्लो चौर थियो । योसँग टाँसिएकामा उत्तरतिर दरबार हाइस्कुल, रानीपोखरी र त्रिचन्द्र कलेजका सरस्वती सदन र घण्टाघर थिए । पश्चिममा वीर अस्पताल थियो । यसै चौरमा दक्खिनतिर एउटा खरीको बोट थियो । यो बोट झ्याम्म परेको तलबाट माथि आकाश छिचल्न नमिल्ने बाक्लो देखिन्थ्यो । यसलाई इतिहास र राजनीतिको चौतारो मानिन्थ्यो । राणाकालदेखि बीपीसम्मको अन्त्य यसमा गाँसिएको थियो ।
यस्तो सपाट मैदानका चार कुनामा राणा शासकका घोडसवार सालिक थिए । बीचमा पूर्व लुमडीथान (भद्रकाली), अलिकति दक्खिनमा सेनाको ससानो ब्यारेक थिए । वरिपरि सल्ला, काइँयाजस्ता रूख बिरुवाले मन प्रफुल्लित गराउँथे । छेउछेउमा वरिपरि हरियाली, अझ हरियाम्मे, थियो । प्रदूषण के हो थाहा थिएन । वातावरण साह्रै स्वच्छ । न धूलो, न कार्बनडाइअक्साइड ।
त्यतिखेरका भेटघाट थलोमा न्युरोडपछि टुँडिखेल थियो । बाहिरबाट काठमाडौं आउनेहरू न्युरोडमा भेटिएनन् भने यो खुला चौरमा भेटिन्थे । फुर्सत वा अल्छीलाग्दा हामीले टहलिन जाने ठाउँ यही थियो । उत्तरमा अलिकति बाटोले छुट्याएको रानीपोखरीपछि यही थलो थियो जहाँ हामी बहालका गुम्सेका अँध्यारा कोठाबाट लामो सास फेर्न पुग्थ्यौं, हरियो दुबोमाथि बस्थ्यौं ।
कसैको छेकबार थिएन । फाट्टफुट्ट असन भोटाहिटीतिरका रैथाने यहाँ खुलापनको आनन्द लिन आएका हुन्थे । कोही लपेस, टपरीमा भोज खाइरहेका हुन्थे । स्कुले केटाकेटी भकुन्डो, क्रिकेट खेलेर रमाइरहेका देखिन्थे । कतैकतै गाईबस्तु र मानिसले गोब्य्राएको र थोप्य्राएको देख्नु भने सामान्य थियो । यहाँ सेनाका जवान, सेनाका घोडा र ट्राफिकका टाँगन घोडा तालिम खेपिराखेका देखिन्थे । आक्कलझुक्कल विदेशी किशोरकिशारीहरू घोडसवारीको रौस मेट्न घोडाका पिठ्युँमा मस्किरहेका र घोडा पड्केर लडिहाल्ने त्रासका अनुहारमा देखिन्थे ।
न्युरोड गेटको सोझो पूर्व टुँडिखेल छिचोल्दै विद्युत् कर्पोरेसनतिर बाटो काटिन्थ्यो । यहाँबाट दक्खिन एकैचोटि थोरैले घेरेको सैनिक क्षेत्र र सानो टुँडिखेल देखिन्थ्यो ।
पहिलोपटक आउँदा मलाई उपत्यकामा चैत महिनामा समेत जाडो भयो । मैले मेरो जीवनको पहिलो कोट सिलाएर लाउँदै विराटनगर फर्किनुपर्‍यो । काठमाडौँ पहिलोपल्ट छिर्दा मेरो बिजोक थियो । वीरगन्जबाट बस चढेर आएँ । ‘बाइरोडको बाटो’ ले भन्भनी रिङटा लागे । म टुँडिखेलको सामुन्ने धरहरामा ओर्लेको थिएँ । वीरगन्ज आइपुग्नसमेत विराटनगरबाट जोगबनी हुँदै भारतीय रेल चढ्दै, छोड्दै, फेरि अर्को चढेर रक्सौल हुँदै दुई दिन लागेको थियो । फर्किंदा फेरि त्यो बिजोक खेप्न मन लागेन । सट्टामा हावाइजहाज चढेँ । त्यतिखेरको फुर्तीमा अरूले देख्ता ‘ओहो ! जहाज चढ्ने ?’ भनुन् र तीभन्दा ‘मै जान्ने ! मै ठूलो !’ देखिन खोजेँ । मेरो यो हवाई यात्रा पनि पहिलो थियो । हवाइअड्डामा ओर्लंदा तराईहुँदो चलेको वैशाखको हावा भत्भती पोल्ने तातो थियो । यसले मेरो मनै विरसिलो बनायो र एकपटक फर्केर फेरि टुँडिखेलमा घण्टौँ अलमलिने सुषुप्त इच्छा भैरह्यो ।
दोस्रोपटक २०२० सालमा बीए परीक्षामा सामेल हुन आउँदा खरीको बोट अलप भैसकेको थियो । यतिखेर दिल्लीबाट आएका एक जना ‘प्राइभेट’ परीक्षार्थीसँग परीक्षाको साझे ‘पेपर्’ मा अरू दुई मित्रसमेत झई निकै लामो समयसम्म यसै चौरमा बसेर अन्तर्त्रिया गरेको सम्झन्छु । यसपछिका दिनमा यसका विनाश क्रम थपिँदै आए । यसैलाई विकास भनियो ।
तेस्रोपटक २०२१ सालमा महाँकाल मन्दिरपूर्व टुँडिखेलमा ह्वास्ह्वासती एउटा नौलो पक्की निर्माण देखेँ । यतिखेर म कसैका लहैलहैमा राजा महेन्द्रको जन्मोत्सव पारेर आएको थिएँ । यही निर्माणलाई सैनिक मञ्च भनियो र यसैमा विराजित राजा महेन्द्रलाई अघिल्तिरबाट हामी युवकले ‘मार्चपास’ गर्दै अभिवादन गरेका थियौँ । यसमा मेरो बाध्यता थिएन, रहर थियो । तिनताका काठमाडौं आउन कुनै उद्देश्य चाहिन्थ्यो र यो राजा महेन्द्रको जन्मोत्सव थियो । यो कार्यक्रममा भाग लिन मैले पहिरेका सेतो कमिज र सेतो प्यान्टलगायत बाटो खर्चसमेतमा आफ्नो परेको थिएन । यो कार्यक्रममा यसरी नै चौधै अञ्चलबाट आएका थिए । उपत्यकाबाहिरबाट यहाँ आउनुलाई ‘नेपाल जानु’ भनिन्थ्यो र यसरी आउन पाउँदा अरूले डाह गरेरसमेत हेर्ने गर्थे ।
मेरो पहिलोपटकको काठमाडौँ र यसपछिका पाँच वर्षमा टुँडिखेलको कायापलट भयो । रत्नपार्क बन्यो, सहिद स्मारक बन्यो, यो स्मारक हुँदै सिंहदरबारतिरको भद्रकाली वरिपरि फराकिलो बाटो खुल्यो । खरीको रूख मात्र होइन, धेरै बोट, बिरुवासमेत अलप भए । राणा शासक घोडा चढेका सालिकहरू चौरमा अर्काअर्का ठाउँ सर्नेमा परे । यिनको सर्ने क्रम रोकियो, रोकिएन समयले भन्ला !
टुँडिखेलमा एक्लो घाम ताप्ता मेरा विद्यार्थीकालको रौसमा महाकवि देवकोटा, कवि शिरोमणि लेखनाथ र नाटककार समका रचनाहरू सम्झिएँ । आफू साहित्यको विद्यार्थीसम्म र बाँकीमा केही नभए पनि नौला विचारमा यहाँ मगज रुमल्लिए ।
माथि आकाश नियाल्दा बादल तरेली पर्दै र तरंगित हुँदै विचरण गरेको देख्नु प्रकृतिको एउटा बेग्लै सहजता थियो । बादलका चोक्टा सोहोरिएर कतिखेर धुम्मिने र सिरिर्र बर्सने भन्न सकिन्नथ्यो । त्यतिखेर जिउले भन्थ्यो, ‘जाडो पो भयो ! न्यानो लुगा लाउनुपर्ने थियो !’ उत्तरमा शिवपुरी, दक्षिणमा गोदावरीका डाँडा देख्न आँखालाई बल पर्दैनथे । रुमल्लिँदै जाँदा रानीपोखरीको जलाशयमा घण्टाघरको टुप्पो पाएँ । अचम्म मानेँ घण्टाघरको टुप्पोमा माछा जलविहार गरिरहेका थिए । आकाशमा होइन, जलाशयभित्र चराचुरुंगी उडिरहेका थिए । एकमनले भन्यो, धरहरा गजूरको कलम तिखारेर रानीपोखरीको मसीदानीमा चोब्दै टुँडिखेलको सपाट मैदानलाई ती सर्जकले कति घोट्न पाए र कति सिंगारे हुन् ! अनि पो रहे अजर, अमर र कालजयी ।
हिजो ती कवि, साहित्यकारले तिखारेर र घोटेर आज धरहरा जर्बुटो र बोदो बनेको होइन, तिनले मसीदानी बनाएर चोब्दा–चोब्दा रानीपोखरीको जलाशय सुकेको होइन, लेख्तै फेरि चित्त नबुझेर च्यात्दै धुजा पारेर ‘डस्टबिन’ मा फाल्ने कागजका चिथ्राजस्तो तिनले चौरलाई च्यातेर धुजा–धुजा बनाएका पनि होइनन् । छेउ रैथानेका भोज, मानिस र पशुका गोब्रिएका थाप्राले यो दुर्गन्धित भएको पनि होइन । बरु यतिखेर मैले पेसाको सम्मानसाथ अबोध ज्यापूले अघिपछि काँधमा नोल भिर्दै सकी नसकी खर्पन बोकेको सम्झेँ । खर्पनले जैविक मलमा काउली सप्लाउन र फलाउन बोक्ने मोह देखाउँथ्यो । धेरै टाढा लैजानुपर्ने थिएन पनि, थियो आजको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भएको काउली गरासम्म, कि आजको रमाइलो मेला थलो भृकुटीमण्डपको फाँटसम्म, कि सिंहदरबारअघि भद्रकालीपूर्वका गहिरी बारीसम्म । ज्यापूका जीवनकर्म चोखो थिए, आजका रासायनिक मलको संहारका लयभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर ।
तिनका चोखो पाइला यही टुँडिखेल वा यसैको वरिपरिबाट देखिरहन पाइन्थ्यो । आज छेउमा चारैतिर ठडिएका सहिदहरूले सम्मान त पाए, तर आफ्नो तीन सय वर्षको इतिहास र संस्कृति धुल्याए । ठूलो र सानो टुँडिखेल गरी दुई माइल सग्लो, लामो टुँडिखेलको संस्कार चोक्टियो । पाँच–छ दशकअघिसम्म एसियाको सबभन्दा लामो ‘परेड ग्राउन्ड’ को भूगोल र रेखागणित मेटियो !
मेरो हुती अब मेरो टीठलाग्दो नजर हो ! प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ १४:३२
पुस्तक : मृत्युको आयु नाप्ने उपन्यास
कार्तिक २३, २०७६ कृष्ण धरावासी
मृत्युलाई टार्न सकिँदैन । त्यसलाई केही समय रोक्न सकिएला आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको सहयोगबाट तर कहिल्यै नमर्ने बनाउन सकिँदैन । सारा इतिहास मृत्युको कथा हो । सारा पुराणहरू मृत्युकै अभिलेख हुन् । नमर्नकै लागि मानिसहरू मरिरहेका हुन्छन् । मर्नुकै विरुद्धमा असाध्य कामहरू गर्न तयार हुन्छन् र तिनै कामहरूकै सिलसिलामा मरिरहन्छन् ।
मृत्यु भनेको माया हो । मायाले मानिसलाई बाँच्न दिँदैन । माया यस्तो प्रिय छ, त्यसले आफ्नै निम्ति मर्न प्रेरित गरिरहन्छ । मानिस देशका लागि भनेर मर्न जान्छ, परिवारका लागि, प्रेमका लागि, मित्रताका लागि । अनेक कारण हुन्छन् जसलाई बँचाउन भनी मानिस मर्न चाहन्छ– मरिरहन्छ । जति पनि साहित्य, संगीत, कला छन्, ती सबैले मृत्युकै प्रशंसा गरेका छन् । दुःखको कथा खुब बिक्छ । दुःख मृत्युतिरकै गोरेटो हो नि त !
मृत्यु कटुसत्य हो । अपरिहार्य हो । तर मृत्यु एक यस्तो कल्पना पनि हो जो आफैंमा डरलाग्दो पनि छ । जीवनको कुनै न कुनै दिन वा क्षणमा जसले पनि भेट्नैपर्ने मन नपर्दो आगन्तुक, जो आफैंमा अर्को थप आतंक छ मृत्यु । नमर्न मन लाग्नेहरूले नै मृत्युलाई यति धेरै डरलाग्दो बनाए । जति धेरै मानिसमा आकांक्षाहरू उम्रिदै जान्छन्, उति नै मृत्युदेखि भाग्न मन लाग्ने हो । मृत्युका कारण र यसबाट बाँच्ने उपायका खोजहरूले नै यसलाई यति महंगो र डरलाग्दो बनाएको हो ।
सबै दर्शन, धर्म, आदर्श, संस्कृति, परम्पराहरू मृत्युविरुद्धका अभियान हुन् तर तिनले पनि मृत्युकै वर्णन गर्छन् आकर्षक पाराले । तिनीहरू मृत्युलाई यसरी वर्णन गर्छन् मानौं तिनीहरू भर्खरै मृत्युसँग भोजमा सामेल थिए । महत्त्वाकांक्षाहरूले बनाएको त्यस आतंकलाई नडराउने बनाउनका लागि एकदम नै सिँगारेर प्रस्तुत गरिन्छ । हरेक स्वस्थ मानिस ‘जीवन केही हैन । मरे मरिन्छ तर मनमा लागेको कुराचाहिं गरिन्छ’ भनेर भीडमा गफ दिन्छ तर कुनै कारणले शरीरमा सामान्य असुविधा मात्र भयो भने सबैभन्दा पहिला अस्पतालको गेटमा सेल्फी खिचिरहेको हुन्छ ।
हाम्रा पुराणमा केही पात्र छन् जसले मृत्युलाई जितेको मानिन्छ– जस्तो अष्ट चिरञ्जीवी । कति पात्रहरू मृत्यु भइसकेपछि पनि बौरिएका र फेरि अर्को कुनै कालमा मरेका भेटिन्छन् । जन्मसँग जोडिएको हर्क हरेक क्षण मृत्यको त्रासदीसँग लुकिरहन्छ । सबै थोकसँग जोडिएको अकाट्यता भनेकै मृत्यु छ ।
नेपाली साहित्यमा लेखिएका अधिकांश कृति वियोगान्त छन् । मलाई लाग्छ नेपाली साहित्यमा अत्यन्त लोकप्रिय हुँदै पहिलोपल्ट दुःख र मृत्युको वियोगले प्रवेश पाएको कृति भनेको ‘मुनामदन’ नै हो । त्यसैको वियोगान्तक प्रभाव बोकेर पछिल्लो कालमा विभिन्न विधामा किताबहरू लेखिएका छन् । मृत्युलाई आँसुसँग साटेका कृति कति छन् कति । हरेक काव्य, महाकाव्यहरूले कुनै न कुनै पात्रलाई नमारी कथानकको अन्त्य नै गर्दैनन् । मैले आफैं पनि अधिकांश कृतिमा मृत्युगीत नै गाएको छु । मानिसलाई बिलौना गाउन मन पर्दो हो सायद । वियोगान्तक कृतिको बजार राम्रो देखिएर पनि होला लेखनमा वियोगले अत्यधिक पृष्ठ पाउने गरेको वा हाम्रो जीवनशैली नै त्यस्तो होला !
मैले पछिल्लोपल्ट मृत्युमाथि पढेको पुस्तक भनेको ‘मृत्युको आयु’ हो । नामैले पाठकलाई मृत्युबारे कल्पना गर्न लगाउँछ र जिज्ञासा पनि उत्पन्न गराउँछ । लघुकथा विधामा आफूलाई एकछत्र उभ्याउन सफल रवीन्द्र समिरको रचनाशिल्प स्वस्थापित छ । यसअघि प्रकाशित दर्जनौं लघुकथाकृतिले उनलाई नेपाली पाठकमाझ परिचित गराइसकेका छन् ।
चिकित्सा पेसामा रहेका उनको रुचि साहित्यतिर कसरी झुक्यो होला भन्ने मलाई लागिरहन्थ्यो । म २०६४ सालमा जागिरसहित राजधानी आएपछि पहिलोपल्ट मेरो उनीसँग कुनै साहित्यिक कार्यक्रममै भेट भएको थियो । त्यसबेला उनले मेरो ‘शरणार्थी’ उपन्यासको तारिफ गर्दै त्यसलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न प्रोत्साहन गरेका थिए । मैले उनका थोरै मात्र लघुकथाहरू पढेको थिएँ त्यसबेला । मलाई लाग्छ लघुकथा विधाले पाएको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार उनकै किताबले पाएको थियो २०६५ सालको पद्मश्री ।
रवीन्द्रको यो पुस्तक उपन्यास हुँदाहुँदै पनि लघुकथा हो । लघुकथा हुँदाहुँदै पनि फेरि उपन्यास हो । डा. ध्रुवचन्द्र गौतमले निकै पहिले योभन्दा पनि सानो रूपमा सूत्रकथाको प्रयोग गरेका थिए । पछि त्यही प्रयोगमा सूत्रउपन्यास पनि लेखिएको थियो । मैले ‘कान्छी राधा’ नामक सूत्रकाव्य लेखेको थिएँ भने अमर त्यागीले पनि सूत्र उपन्यास लेखेका थिए । सूत्रलेखन अत्यन्त छोटोमा धेरै भनिने विधा हो । सूत्रलेखनलाई एकप्रकारले काव्यमा मुक्तक वा हाइकुजस्तै मान्न पनि सकिन्छ । यसलाई अघि बढाउन सके यो अर्को प्राप्ति हुन सक्छ ।
नेपाली आख्यानमा लघुकथाको यात्रा निकै लामो भए पनि त्यो कथामै सीमित थियो । लघुकथा पढ्दा छोटो र सजिलोजस्तो लागे पनि लेख्न गाह्रो विधा हो । लामोमा मात्र भन्ने बानी परेका लेखकहरूका लागि लघुकथा चुनौती नै हुन सक्छ । यसलाई गोडमेल गर्न लघुकथा समाज नै स्थापना गरी यस विधालाई अधि बढाउन निकै काम भइरहेको पनि छ । लघुता नै लघुकथाको आफ्नो विशेषता हो । त्यसलाई त्यसको सीमाबाट बाहिर निकाल्ने काम खासै भएको देखिँदैन । त्यो सीमाबाट बाहिर निकाल्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि आन्तरिक संवादहरू हुन सक्छन् तर पहिलोपल्ट रवीन्द्रले त्यसलाई उपन्यासमा उभ्याएका छन् । विधागत उपलब्धिका आँखाले हेर्दा यो एउटा विशेष प्राप्ति पनि हो ।
लघुकथा विधालाई उपन्याससम्म पुर्‍याउने आँट गर्नु लेखकको साहस नै हो । यस्तो आँट धेरैअघि झापामा शिव प्रणतले गरेका थिए गजल काव्य लेखेर । त्यस बेलासम्म गजलमा काव्य लेखिन सक्छ भनेर कसैले सोचेका पनि थिएनन् होला । केही समय गजलमा काव्य हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस पनि छेडिएको थियो । पछि गोपाल अश्कले गजलमा महाकाव्य नै पनि लेखेका थिए ।
प्रयोगमा आउनु आफैंमा साहसको काम त हुँदै हो, त्यसलाई स्तरीयतासहित ल्याउन सक्नु आफैंलाई ठूलो परीक्षा पनि हो । यस्ता धेरैजसो प्रयोग प्रयोगकर्तालाई नै चुनौती हुने गरेका पाइन्छन् । त्यस्तो चुनौती स्वीकार गर्न पछिल्लोपल्ट उभिएका छन् रवीन्द्र ।
एक सय अन्ठानब्बे पृष्ठभित्र अटाएका १ सय ६६ लघुकथाले बनिएको छ यो कृति ।
छोटोमा २२ शब्ददेखि लामोमा ३२४ शब्द सम्मका कथाहरू छन् । एउटा–एउटा मात्र पढे यस कृतिका सबै टुक्रा एक–एकवटा लघुकथा हुन् । क्रमैसँगले पढ्दै गए हरेक कथा उपन्यासिक आख्यानका भरिया हुन् । यस कृतिले लामा–लामा अध्यायहरूमा मात्र उपन्यास लेख्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई दोस्रोपल्ट भत्काएको छ । पहिलोपल्ट यस्ता लघुपृष्ठहरूमा उपन्यास लेख्ने काम २०५० सालमा सञ्जीव उप्रेतीले ‘आलु, नौनी र कफी’ उपन्यास लेखेर पूरा गरिसकेका थिए तर त्यो उपन्यास लघुकथा शैलीको थिएन ।
कृतिको शिल्पपक्षको फरक विशेषता रहे पनि गुणवत्ताले उभिन नसके त्यसको खास अर्थ हुँदैन । समिरको यो कृति वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका पीडामाथि लेखिएका निकै कृतिहरूभन्दा फरक र विशेष छ । यसले बोकेको विषयवस्तु सुरुदेखि नै वियोगान्त छ । कृतिको नायक मरेको छ र मृत्युपछि उसले अनुभव गरेका कुराहरू नै सम्पूर्ण किताब हो । मृत्यु शब्द सुन्नासाथ मनमा जुन भय उत्पन्न हुने हो यस कृतिमा भयको त्यो रूप छैन बरु मृत्यु एक मनोरञ्जन बनेको छ ।
मृतकका माध्यमबाट समाजको ढोंगी चरित्र र परिवारको दुईधारे मानसिकताको उत्खनन भएको छ । मृत्यु आतंक हैन, अनुभव मात्र हो भन्ने अनौठो सन्देश पनि छ यसमा । निरपेक्ष भावको प्रस्तुतिले मृत्युमाथि हुने भयलाई एकदम नै सामान्यीकरण गरिएको छ । आफू मरेपछि परिवार र समाजले गर्ने अभिव्यक्ति र फोस्रो सहानुभूतिको क्रूर चित्रण पनि छ यहाँ । पुस्तकका हरेक टुक्राले फरक–फरक र पाठकले अनुमान गरेभन्दा भिन्दै कुराहरू टुक्कटुक्क भनेर पठनरुचिलाई बढाएको बढाएकै गर्छ ।
कृतिको विषयवस्तुले नै पाठकलाई सांख्यदर्शनतिर प्रवेश गराउँछ । जन्म र मृत्युको असमापक चक्रमा घुमिरहने जीवनविम्बले कृति रंगिएको छ । कृतिले शिवपुराण, विष्णुपुराण, गरुडपुराण, श्रीमद्भागवत् गीता, कुरान र बाइबलका आध्यात्मिक सांस्कृतिक विश्वासहरूलाई समातेर मृत्युपछिको पराकल्पनामा आधुनिक जीवनको संकटलाई नापेको छ । खासमा आजको हाम्रो जीवनसंघर्ष के हो र केका लागि ? हामीले हेर्ने गरेको जीवनचित्र कस्तो हो ? यो कथाले बोकेको दुःखको भारी नेपाली जीवनस्तरसँग मात्र सम्बन्धित छैन । नायकको लाससँगै सुताइएका अरू विदेशी लासहरूको पीडाका कथाले पनि पाठकलाई केही छिन भावुक बनाउँछ ।
जीवमा आत्मा हुन्छ र त्यसले मृत्युपछि पनि यस धराधाममा भइरहेका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट देखिरहेको हुन्छ भन्ने पुनर्जन्मीय विश्वास र स्वैरकल्पनाको प्रयोग गर्दै समसामयिक जीवनका विसंगतिहरूलाई अत्यन्त मिहिन पाराले केलाइएको छ । हाम्रो देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनेक विसंगतिको ऐना हो यो कृति । वैदेशिक रोजगार नामको आकर्षक शब्दका पछि होमिने युवापुस्ताको कारुणिक चित्र हो यो कृति । कतै हँसाउने, कतै गम्भीर बनाउने र कतै रुवाउने यो उपन्यास नेपाली उपन्यास संसारमा फरक स्वादको विशेष कृति बनेको छ ।
लेखक आफैंले ती क्षेत्रहरूको स्थलगत भ्रमण तथा अध्ययन गरी लेखिएको यस कृतिमा अरबी प्रशासनिक र प्राविधिक कुराहरूलाई प्रामाणिक ढंगबाट प्रस्तुत गरिएकाले पनि कृतिको विश्वसनीयता बढेको छ । लेखक आफू स्वयं चिकित्सकसमेत भएकाले आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका कुराहरूलाई सतर्कतापूर्वक समावेश गरिएकाले कृतिमा प्रश्न उठाउनुपर्ने त्यस्ता खासै ठाउँ भेटिएनन् ।
मृत्युका अनेक परिभाषा गर्नेहरू र मृत्युलाई सहज ढंगले लिनुपर्छ भनी स्वस्थ अवस्थामा आदर्श छाँट्नेहरूका पनि अन्तिम कालको बाँच्न चाहने छटपटी सबैभन्दा बढी त चिकित्सकहरूले नै देखेका हुन्छन् । त्यसको सुविधा पनि रवीन्द्रलाई छ । उनले त्यो अनुभव पनि पृष्ठैपिच्छे पोतेका छन् ।
कृतिको शीर्षक नै विम्बात्मक छ । मृत्युलाई हामी जीवनको अन्त्य भनेर बुझ्छौं तर लेखकले यहाँ मृत्युको पनि आयु तोकिदिएका छन् । यसअनुसार त मृत्युको आयु एकदम नै छोटो रहेछ । गरुडपुराणीय कर्मकाण्ड पद्धतिका आँखाले हेर्दा मृत्युको आयु त तेह्र दिन मात्र देखियो । तेह्र दिनपछि यसको यात्रा कि देवदूतका पछि कि यमदूतका पछि हुने रहेछ । यस लोकको मायामोहको सीमाभरि मात्र रहेछ मृत्युको आयु भनेको । आध्यात्मिक परम्पराका आँखाले जीवन र मृत्युबारे अध्ययन गर्न चाहनेहरूले यसमा साहित्यइतर विश्लेषण गर्ने प्रशस्त ठाउँ भेट्नेछन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ १४:३१
‘दुरू–फकं’ को दुःख
मीन, ग्रे भाम !
अपडेटः बुधबार, २१ साउन, २०७७ । ०६ : ४० बजे
बिचौलियालाई सरकारी छहारी
सम्पादकीय श्रावण २१, २०७७
सार्वजनिक खबरदारीका बाबजुद सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्नुले बन्न लागेका हाम्रा संस्थाहरू कसरी क्षयीकृत हुँदै जान्छन् भन्ने देखाउँछ ।...